संघीय ससदमा आज बजेट प्रस्तुत हुँदै, बजेट कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित | Safal Khabar
संघीय ससदमा आज बजेट प्रस्तुत हुँदै, बजेट कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित
विहीबार, १५ जेठ २०७७, ०८ : २५
काठमाडौं । सरकारले २०७७-०७८ का लागि आर्थिक आय व्यय विवरण (बजेट) आज संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ । प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रिय सभाको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले पेश गर्ने यो बजेट तेश्रो हो । राजस्व संकलनको लक्ष्य, फागुनमा गरिएको संशोधन र कोभिड–१९ को परिस्थितिपछिका शीर्षकगत हिसाबमै बढी केन्द्रीत रहेर यस वर्षको बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयमा केन्द्रीत रहेर बजेट तयार भएको र यसपटकको बजेटमा कुनै नयाँ योजना भने समावेश नगरिएको प्रष्ट पारिसकेका छन् । बजेटको आकार चालु वर्षकै हाराहारीमा हुने गरी अर्थमन्त्री खतिवडाले तयारी गरेका छन् । यसपटकको बजेटमा बृद्धभत्ता र तलब वृद्धिको कुनै कुरा समावेश छैन । मध्यपान र धुम्रपानमा कर बढन सक्ने अनुमान गरिएको छ । महँगा र स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा कडाई गरिने, कृषि र प्रविधिका क्षेत्रमा मात्र नयाँ केही कार्यक्रम समेटिन सक्ने अनुमान बजेट आउदै गर्दा गरिएको छ ।
सीमित स्रोतबीच आउने बजेट स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना, कृषि र प्रविधिको क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रमसहित आउने अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । यस पटक पनि सोही हाराहारीकै बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा छन् । कोभिड १९ ले अति प्रभाव पारेका क्षेत्रको आर्थिक पूर्नरुथानका लागि विशेष कार्यक्रम समेटने गरी बजेट आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । होटल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणलगायत पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता बजेटले दिने अनुमान गरिएको छ ।
विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरु अधिकमात्रामा स्वदेश फर्किने र स्वदेशभित्रै पनि रोजगारीमा रहेकाहरुको कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कृषि लगायतका क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ । रोजगारीलाई पुर्नस्थापित गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन र स्वरोजगारी बढाउन कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुन उत्प्रेरित कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा सरकार छ । त्यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहका सरकारका वीचमा समन्वय गरी कार्यक्रम बनाइने गरी बजेटमा ब्यवस्था गर्न लागिएको बताईएको छ ।
कृषिको सम्भावना र अवसरको खोजी गदै कृषिमा बजेट बढन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा पनि सोही अनुसार नै योजना बनाएकोले कृषिमा केन्द्रीत रहेर बजेट आउने अनुमान गरिएको छ । सांसदलाई दिइदै आएको सांसद विकास कोषका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत वृद्ध भत्तालाई अहिले यथाअवस्थामा राख्ने र कर्मचारीहरुको तलव पनि वृद्धि नगरी बजेट आउने छ ।
गत चैत ११ यता निरन्तर जारी लकडाउन र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गरेर बजेट आउन लागेको छ । यसले पनि यसपटकको बजेटमा आर्थिक पूर्नरुथ्थानका कार्यक्रममा मात्र बजेट केन्द्रीत रहेको बताइएको छ । ४ बजे संघीय संसदका दुवै सदनका संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्नु अगावै आजै बजेटका बारेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जानकारी गराउने र त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर बजेट पारित गर्ने तयारीमा सरकार छ ।
७२ प्रतिशत जनतालाई कोभिड खोप उपलब्ध गराउँछौँ ः मन्त्री ढकाल